धर्ना बसेका निर्मलाका बुबालाई अचानक के भयो यस्तो ? - Everest Dainik - News from Nepal
धर्ना बसेका निर्मलाका बुबालाई अचानक के भयो यस्तो ?
कंचनपुर, कार्तिक २९ । छोरीको हत्या भएपछि न्यायका लागि धर्नामा रहेका निर्मला पन्तका बुवा यज्ञराज पन्त बिमारी परेका छन् । कंचनपुरको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गेटमा विगत पाँच दिनदेखि धर्नामा रहेका पन्त चिसोका कारण बिरामी परेको स्वास्थ्यकर्मीहरूले बताएका हुन् ।
पन्तलाई महाकाली अंचल अस्पतालबाट आएको स्वास्थ्यकर्मीहरूको टोलीले धर्नास्थलमै उपचार गरिरहेका छन् । उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरूका अनुसार उनको छातीमा संक्रमण देखिएको छ र उनलाईज्वरो समेत रहेको छ ।
पन्तलाई हिजो रातिदेखि ज्वरो र खोकीले पिरोल्न थालेको थियो । अहिले उनकी आमाको स्वास्थ्यमा समेत समस्या देखिन थालेको त्यहाँ उपस्थित सामाजिक कार्यकर्ताहरूले बताएका छन् ।
गत साउनमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी भीमदत्त नगरकी किशोरी निर्मला पन्तको हत्यारा अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन । विगत चार महिना यता यस मुद्दाले देशव्यापी चर्चा पाएको छ ।
ट्याग्स: Hunger strike, Nirmala Pant